Ukuhambisa iDPP kulo lonke elaseMalaysia ngeJet Signiant - NAB Bonisa Izindaba nge Broadcast Beat, Broadcaster Official of NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Ukudilizwa kokuqukethwe » Ukuletha i-DCPs kulo lonke elaseMalaysia eneJet Signiant
Ukuletha i-DCPs kulo lonke elaseMalaysia eneJet Signiant
Ngu-Avinash Suresh, uMqondisi ku-Yusari Filem
Izinga lokutholwa kobuchwepheshe obusha bobuchwepheshe buhlukahluka emhlabeni jikelele, futhi iMalaysia isiye yahlala ekupheleni kwe-spectrum. Isibonelo, kwakungakaze kube yiminyaka engu-6 edlule ukuthi ukuhamba kusuka 35mm I-Digital Cinema ibambe ngokugcwele. Ngenkathi ihamba kancane ekuqaleni, lapho izinzuzo kanye nokuthuthukiswa kwekhwalithi kwacaca, kwamukelwa ngokuphelele ezweni lonke.
Okwamanje, iMalaysia isendaweni efanayo nekhono lobuchwepheshe bokusheshisa. Futhi, nakuba kubonakala sengathi singemuva, kunenzuzo ethile esimweni sethu. Ngemuva kweminyaka eminingana emakethe, ubuchwepheshe be-speed acceleration buye bukhula ngendlela ephawulekayo, futhi imboni okwamanje ibona isondo lesibili sokwamukelwa kanye nokuphakama kwezixazululo ze-SaaS zefu. Amazwe afana namaMalaysia namabhizinisi afana no-Yusari azimisele ukuweqa phezu kwegagasi lokuqala, futhi abambe iqhaza elingaphezulu elingenakulinganiswa nelingabizi kahle lokutholwa.
I-Jet Power Power ukuhamba nge-Yusari
U-Yusari Filem wasungulwa ku-1976 njengenkampani yokuqala yokubhala phansi eMalaysia. Siqale ibhizinisi lethu 35mm imibhalo engezansi isetshenziselwa ukushisa okushisayo futhi ekugcineni yathuthela ku-digital worklow ukusekela i-Digital Cinema Packages (DCPs). Ngemuva kokulungisa ingqalasizinda yethu yangasese kanye nomkhawulokudonsa ngangokunokwenzeka, ukuthutha ukufaka ukusheshiswa kwefayela kwaba ukuqhubeka kwemvelo futhi ekugcineni safika Umkhiqizo omusha we-Signiant kubizwa ngeJet.
I-Jet iyisisombululo se-SaaS esenza kube lula ukuzenzekelayo nokusheshisa ukudluliselwa kwamafayela ohlelweni. Iphinde ifake indlela entsha yokuthutha ehlakaniphile esebenzisa ukufundwa komshini ukuthuthukisa ukuthunyelwa. I-Signiant inesinye isixazululo esibizwa ngokuthi iMenenja + Agents, esiye sahlala isikhathi eside futhi isetshenziselwa izinkampani ezinkulu zeMediya zomhlaba ukuzenzelela ukudluliselwa phakathi kwezindawo zabo zomhlaba nabalingani, kodwa kwakungeyona into efanele ebhizinisini lethu. I-Jet inikeza iqoqo eliqinile elinamandla okufana namabhizinisi, kodwa libhekene nezidingo kanye nezabhajethi ezinkampani ezincane.
Ukwamukela i-Jet kusenze sikwazi ukuqala isevisi entsha ye-brand ebizwa ngokuthi 'Hambisa nguYusari,' ezosingatha ukulethwa kwethu kweDiskithophu ye-Digital Cinema Packages (DCPs) kuma-cinema kulo lonke elaseMalaysia. Ukuze uchaze ukusetha, iseva ye-Yusari Move izofakwa kuma-cinema futhi le seva izoxhunyaniswa ne-TMS yendawo. Uma i-DCP isilungele ukusatshalaliswa, izothunyelwa nge-broadband kuma-cinema ahambisanayo usebenzisa i-Jet Signiant. Ngemva kokudluliselwa, iseva ye-Move izokwenza isheke ephakheji ukuqinisekisa ukuthi ayikho inkinga yobuqotho. Lesi sixazululo asikaze senzeke ngaphandle kokusheshisa kwe-Signiant Jet, ukuthembeka nobuchwepheshe obuningi bokuphepha. Ngemuva kwezinyanga eziningi ze-R & D futhi sisebenzisana kakhulu neqembu e-Signiant, sikwazi ukuthuthukisa isisombululo esakhiwe ngenhloso yokudilizwa kwe-DCP.
IJet ikhuluma ngobuhlungu bokudilizwa kwe-DCP
Ukuletha i-DCPs isici esiyinhloko sebhizinisi lethu. Eminyakeni eyisithupha eyedlule, sithumele i-DCP kumabhayisikobho ngezingcingo ze-hard disk. Ngokujwayelekile sisebenzisa izinsizakalo zezinkampani kulezi zidingo, futhi eziza nezinkinga eziningi ezifana nokulibaziseka, ukukhathazeka kokuphepha kanye nomthelela wendawo.
Enye yezinselelo ezinkulu ekusabalaleni i-DCPs ukuthi akumele kube khona ukuyekethisa ngobuqotho bemininingwane. I-DCP ngayinye iqukethe uhlu lokufaka. Wonke amafayela ekubunjweni aphezulu (inani le-hash yi-Base64 ikhodididi ye-SHA-1 checksum) futhi i-hash yabo igcinwe ohlwini lokufaka. Leli fayili lisetshenziswe ngenkathi kungenwa kwisiphakeli se-cinema yedinari ukuqinisekisa ukuthi idatha yonakalisiwe noma ihlukunyezwe ngandlela-thile. Uma ngabe enye yamafayela ayihambisani, iseva ye-cinema izokwenqaba ukungenisa ibhayisikobho - ukusetshenziswa kwama-disk hard disk wokusabalalisa kwe-DCP kubangela izinselelo zenkohlakalo ngenxa yezinkampani ezimbi.
I-Jet Signiant ingakhulumi nje kuphela nezinselelo, inikeza futhi isisombululo esengeziwe esiphumelele, esilula futhi esinamafutha - kanti-ke, umehluko wezwe uma kuziwa ngesivinini.
Njengamanje, sihlola ukuhamba no-Yasuri nama-cinema amahlanu, futhi sihlela ukuqhubekela ezindaweni ze-100 ekupheleni konyaka. Kodwa-ke, endaweni yangaphambili yesifunda, kusekhona umsebenzi omningi okumelwe uwenze. Ukuvinjelwa kwe-inthanethi yaseMalaysia (ukulinganisa izindleko) ukuhamba ngendlela eminye yabomakhelwane bethu. Ukusebenza nge-Signiant kusenza sikwazi ukuthuthukisa izimo zethu zenethiwekhi futhi sisebenzise ngokugcwele umkhawulokudonsa esinakho. Ngaphezu kwalokho, njengoba isivinini se-Inthanethi saseMalaysia sithuthuka esikhathini esizayo, I-Jet Signing kuzosisiza ukuba sisebenzise amathuba amasha, esifundeni nasemhlabeni wonke.
CES2017 I-Cobalt Encoder I-Digital Nirvana I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-IBC ukuqapha imidiya I-MStar SoftAtHome I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows I-subtitling umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC	2019-05-15
Ngaphambilini: I-Boom Operator
Olandelayo: I-Dejero Izisa Ukusekelwa kwe-SMPTE ST 2110